बिवाह गरेको ३ दिनमै सकुन्तलाको हत्या, घटनाको रहस्य अचम्मको (भिडियो) | भिडियो
बिवाह गरेको ३ दिनमै सकुन्तलाको हत्या, घटनाको रहस्य अचम्मको (भिडियो)
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on बिवाह गरेको ३ दिनमै सकुन्तलाको हत्या, घटनाको रहस्य अचम्मको (भिडियो)
खोटांगको दिक्तेलरुपाकोट मजुवागढी नगरपालीकाको वडा नं. ९ को निर्मलीडाडाँमा एउटा ड र ला ग्दो र क ल्पना समेत गर्न नसकिने घ टना घटेको थियो । त्यो घ ट ना थियो आफ्नै दाईले आफ्नी बहीनीको ज्या न लिएको भन्ने । दाईले आफ्नै बहीनीको ज्या न किन लिए त भन्ने विषय बुझ्दै जाँदा मृ त क बहीनीले दाईले रोजेको केटासंग बिहे नगरीकन आफ्नो राजाईको केटासंग बिहे गरिन् त्यो पनि अन्तरजातिय बिहे गरेको भन्ने का र ण बाहिरिएको थियो ।
उक्त समाचार सार्वजनिक हुँदा करिब सात वर्षदेखि प्रेम स म्बन्धमा रहेकी सकुुन्तलाले शुक्रबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडाका २६ वर्षीय दिनेश कटवालसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको तीन दिनपछि सोमबार दाजुु सञ्जीवले बहिनी सकुुन्तलाको घरैबाट उनलाई ज ङ्गलमा लगेर ज्या न लिएको खुल्न आएको हो ।
ज्या न लिनुभन्दा अघिल्लो राति दाजुु सञ्जीवको फोनबाट पटकपटक ध म्की आइरहेको र बिहान आफैँ हाम्रो घरमा आएर सकुुन्तलालाई लगेर ज्यान लिएको उनका श्रीमान् दिनेशले जनाएका छ्न । “हाम्रो घरायसी व्य वहार छ भन्दै दाजुु सञ्जीवले सकुुन्तलालाई साथैमा लगेर गए”, उनले भने, “घरबाट हिँडेको केही समयपछि नै सकुुन्तलासँग फोन स म्पर्क नभएपछि खो ज तलास गर्दा से खुवा र निर्मणलीडाँडाको सिमानामा पर्ने सा प्सुुखोला नजिकैको जङ्गलमा ज्या न गएको अवस्थामा श ब फेला पर्यो ।”
तर अहिले आएर घ टनाको वा स्तविकताले अर्कै रुप लिएको छ । यो कुरा सुन्दा सबै आ श्च र्य पर्ने छन् । यो घ ट ना को वास्तविकतालाई मृ त क सकुन्तला राईकै आफ्नै दाई र भाईले उ जागर गरेका छन् । जुन कुरा सुनाउँदा पनि सुन्दा पनि अ प त्यारीलो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता भने त्यही नै रहेछ । अन्तरजातीय बिहे गरेको भन्दै मृ तक सकुन्तालाको ठूला बुवाको छोरा (दाई) ले आफ्नी अंकलकको छोरी नातामा बहिनी पर्नेलाई मा रेको भन्ने कुरा व्या पक रुपमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
तर वास्तविकता त्यो रहेनछ । वास्तविकता त उनै ठुला बुवाका छोरा भनिनेले आफ्नै अंकलको छोरीलाई ज र्ब ज स्ती अ नैतिक स म्ब न्धमा राखेको कुरा बाहीरिएको छ । यो कुरा मृ त क सकुन्तलाकै आफ्नै दाई र भाईले एक अ न्तरवार्तामा बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार अब आफ्नो सम्बन्ध आफ्नै बहीनी र दिदी मा र्ने दाईसंग सदाकालागी टु टेको बताएका छन् । उनीहरुले आफ्नो बडा बाउको छोराले आफ्नै चेलीसंग अ नैति क स म्बन्ध नराखी आफुहरुलाई समेत ड’र र त्रासमा राखेको पनि खुलाएका छन् ।
भिनाजुुको घरबाट हिँडेको करीब एक घण्टामै दिदीको ज्या न लिएको हुनसक्ने सकुुन्तलाका भाइ समीर राईले बताए । “दाजुु सञ्जीवले दिदीलाई जङ्गलमा लगेर कु ट्दै गरेको भेडा गोठालाले देखेका रहेछन्”, उनले भने, “यस घटनामा संलग्न दाजुु सञ्जीवलाई कडाभन्दा क’डा का’रवाही गरियोस् ।”
विद्यालय तहको अध्ययन गर्दादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेका दिनेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तीन वर्ष मलेशिया बसेर हालै घर आएका थिए । भाइ समीरका अनुुसार सकुुन्तला प्रेमी दिनेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया रहेको समयमा काठमाडौँमा सिलाइकटाइ पेशा गर्दै आएकी थिइन् ।
केही समय अगाडि मात्रै माइतीघर सेखुवा आएकी सकुुन्तलाले आफूूसँग पनि दाजुु सञ्जीवले ‘मैले रोजेको केटासँग विवाह गर्नुपर्छ’ भन्दै द’बा ब दिने गरेको जानकारी दिएको भाइ समिरले बताए । सकन्तलासँग तीन दिन अघिमात्र विवाह गरेका दिनेशले पनि श्रीमतीको घटनामा संलग्नलाई क’डा का’रवाही गर्न माग गरेका छन् ।
घटनामा संलग्न राईलाई प क्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले जनाएका छ्न । “घ टनाका बारेमा अ नुसन्धान भइरहेको छ”, उनले भनिन्,, “उक्त ब्याक्ति नियन्त्रणमा रहेकाले केही समयपछि स त्यत थ्य सार्वजनिक गरिनेछ ।” बाँकि भिडियोमा
प्युठान घ’ट’ना ३आमा छोरी संगै झु’न्डिनुको यस्तो छ कारण?
साईकल वालीलाई नयाँ घरमा भब्य स्वागत मीराले पाएको घर यस्तो छ तुरुन्तै हेर्नुहोस् भिडियो
हरिहर अधिकारीको खुलासा नितासँग विवाह गर्दिन, स्वस्तिमा मन पर्छ (भिडियो हेर्नुस्)